နတ်မှီတောရသို့ သွားခြင်း | ပျူနိုင်ငံ
ရေးသူ- သုဒ္ဓ (၂၄- ဇူလိုင် ၂၀၁၁)
“ရှင်ဥက္ကဋ္ဌသည် သူ၏ အမြင်သစ် အတွေးသစ်များပါသည့်
စာအုပ်စာတန်းမျိုးစုံကို ရေးသား၏။ ထိုအခါ တိုင်းပြည်တွင်
ဂယက်ထသွားလေ၏။ အဟောင်းသမားများ၏ ဝိုင်းပယ်ခြင်းကို
ခံရလေ၏။ တော်လှန်သော အတွေးရှင်တို့သည် ခေတ်တစ်ခေတ်
၏ ဝိုင်းပယ်ခံရသော်လည်း၊ နောင်တစ်ခေတ်၏ အပူဇော် ခံရ
တတ်လေသည်။ ခေတ်တစ်ခေတ်၏ ‘ချဉ်ဖတ်’ဖြစ်ရသော်လည်း၊
တောင်တွင်းကြီးမြို့၊ မောင်းတိုင်(၁)ရပ်ကွက်၊ ကန်သာယာလမ်းမှ
တဆင့် ကန်ပေါင်ပေါ်သို့ တက်လိုက်သောအခါ အပြောကျယ်လှသည့်
ကန်တော်ကြီးကန်ကို တွေ့မြင်ရသည်။ မြေလတ်မြို့တစ်မြို့တွင်
ဤမျှကျယ်ပြောသည့် ရေကန်တစ်ခုကို မြင်ရလိမ့်မည်ဟု မထင်မိခဲ့ချေ။
ကြာပန်းနီနီတွေက ကန်ရေပြင်ထက်သို့ တိုးတက်ဝင့်ကြွားကာ လှအောင်
ပွင့်နေကြသည်။ ကန်ပေါင်တစ်လျှောက်တွင် အခါကြီးရက်ကြီး ဝါဆို
လပြည့်နေ့နံနက်ခင်း ၁၀နာရီ၌ ငါးမျှားသူတို့ဖြင့် စည်ကားလှပါသည်။
..... ကန်ပေါင်လမ်းကို ဆုံးအောင်သွားမိသောအခါ လူပရိသတ်စည်ကား
လှသော ကျောင်းတိုက်တစ်ခုကို တွေ့သည်။ ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်နေကြ
ခြင်းဖြစ်သည်။ နတ်မှီတောရထင်၍ အလောတကြီး ဝင်လိုက်မိသော
ကျောင်းက ရဲအစောင့်အရှောက်နှင့် အရာရှိအရာခံများ သင်္ကန်းကပ်၊
ဆွမ်းကျွေးနေကြသည်။ အဝင်မှားခဲ့ပြီ။ မေးမြန်းကြည့်တော့မှ
နတ်မှီတောရသို့ သွားသည့် လမ်းသွယ်ကလေးကို အမှတ်မထင်
----- စည်ကားလှသောထိုကျောင်းမှ ပြန်ထွက်လာခဲ့ပြီး နတ်မှီ
တောရသို့ ဆိုင်းဘုတ်ကို တွေ့အောင်ရှာ၍ တောလမ်းကလေး
အတိုင်း ဝင်ခဲ့သည်။ ယခုမှပင် ရောက်ချင်လှသည့် ဆရာတော်
ရှင်ဥက္ကဋ္ဌ၏ကျောင်းသို့ ရောက်တော့သည်။ ဝါဆိုလပြည့်
ဖြစ်သော်လည်း ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်သူ ပရိသတ်က လက်ချိုး
ရေ၍ပင် ရလောက်သည်။ လူနည်းစုနှင့် တည်တံ့နေရသော
ကျောင်းကလေး။ ကျောင်းရှေ့ကိုရောက်သောအခါ ဖိနပ်ချွတ်သည့်
အကျင့်က မပျောက်နိုင်၍ ချွတ်လိုက်မိသေးသည်။ ပြီးမှ
ဆရာသိန်းဖေမြင့် နတ်မှီတောရသို့ ရောက်ခဲ့စဉ်က တွေ့ခဲ့သည်
ဆိုသော “ကျောင်းဝင်းအတွင်း ဖိနပ်စီးနိုင်သည်” ဆိုင်းဘုတ်
ကလေးကို သတိရလိုက်သဖြင့် ချွတ်ထားသော ဖိနပ်ကို ပြန်စီး
----- ရောက်လျှင်ရောက်ချင်း ဆရာတော်ရှင်ဥက္ကဋ္ဌ၏ ဂူသင်္ချိုင်း
ဆရာတော့် ပုံတူရုပ်တုကိုလည်း ဂူသင်္ချိုင်းထက်၌ ဖူးတွေ့ရသည်။
ဂူသင်္ချိုင်း၏ ပတ်ပတ်လည် တံတိုင်းနံရံများပေါ်တွင် ဆရာတော်
ရေးသားခဲ့သော စာစုစာရင်းနှင့် သြဝါဒများကို ရေးထွင်းထားသည်။
စာစုစာရင်းကို ပါလာသည့်မှတ်စုစာအုပ်တွင် ကူးရေးရတော့သည်။
၁။ ရွှေချိန်ခွင် စာအဖြေ
၂။ တကယ့် စာတန်
၄။ စိန်တင့်ကြီးဝတ္ထု (ပ၊ဒု၊တ၊စ)
၅။ စဉ်ပြိုင်သာသနာ (ပ၊ဒု)
၇။ နတ်မှီရေစမ်းမှ ရေပန်းကလေးများ
၈။ ဓမ္မစကြာ (နတ်မှီဟောစဉ်)
၉။ စစ်တွင်းကြုံရ ငါ့ဘဝ
၁၂။ ဗုဒ္ဓ စာချွန်တော်
၁၃။ ဗုဒ္ဓ အဘိဓမ္မာ
၁၄။ ဗုဒ္ဓ မှတ်ကျောက်
၁၅။ အသင်လူသား ဘာမှားနေလဲ
၁၆။ အိုယောဂီ သင်ဘယ်ကိုသွားမှာလဲ
၁၇။ ကြိုက်ရာရွေး လမ်းနှစ်သွယ်
၁၈။ အစွဲပြုတ် တဲကုတ်ရွှေနန်းတော်
၂၀။ ဗုဒ္ဓ ဝိနည်း
၂၂။ လက်ဝဲနိုင်ငံများနှင့် ဘာသာလွတ်လပ်ပုံ
၂၃။ လူသေ လူဖြစ်
၂၄။ မဟာယာန ဗုဒ္ဓဝင်
၂၆။ လူသားနှင့် မြေလွှာ
၂၉။ ကမ္ဘာ့အဘိဓမ္မာ လက်စွဲ
၃၁။ အဘိဓမ္မာ့ အဘိဓမ္မာ(ကမ္ဘာ့ဒဿနကျမ်းကြီး)
၃၂။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် (အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်)
၃၃။ ကထာဝတ္ထု (အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်)
၃၄။ မိဂဒါဝုန်တရား (အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်)
၃၅။ လမ်းနှစ်သွယ် (အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်)
၃၆။ ဓမ္မပဒ (အူရဒူဘာသာဖြင့်)
----- ကျောင်းဆောင်ဟောင်းထဲသို့ ဆက်လက်ဝင်မိသောအခါ
ကျောင်းတိုင်တွင် ချိတ်ထားသော မှန်ပေါင်အပြည့် ဆရာတော်
ရှင်ဥက္ကဋ္ဌ၏ ပုံတူပန်းချီကားကို ဖူးတွေ့ရသည်။ ပန်းချီရေးသူ
အမည်ကို သိချင်သဖြင့် အောက်ခြေလက်မှတ်ကို ဖတ်ကြည့်
သောအခါ သဲသဲကွဲကွဲ မမြင်ရတော့ပေ။ အရှင်ဇဝန(နေရှင်နယ်)၊
ဆရာတော်ရှင်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ကျောက်ကွင်းရွာ သူကြီးဦးလှောင်တို့
တွဲရိုက်ထားသော အဖြူအမည်းဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုလည်း တွေ့ရသည်။
ကျောက်ကွင်းသူကြီး ဦးလှောင်ကို ဓာတ်ပုံထဲတွင် မြင်ရသောအခါ
က ခေါင်းထဲသို့ ရောက်လာသည်။ ၁၉၃၆ခုနှစ် ဘာသာပြိုင်ပွဲကြီး၌
ပြောဟောခဲ့သော ဆရာတော်၏ စကားသံတရားသံတို့ကို ကြည်ညို
“လူတိုင်းမှာ ကိုယ်ပိုင်အသိ၊ ကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်ပညာ၊ ကိုယ်ပိုင်ဝေဖန်
ချက်၊ ခံယူချက်ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ အဲဒီ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ ကိုယ်ပိုင်
အသိဥာဏ်နဲ့ စဉ်းစားဆင်ခြင်ဝေဖန်ပြီး ဘယ်တရားဟာဖြင့်
သဘာဝကျမကျ၊ ယုတ္တိရှိမရှိ၊ မှန်မမှန်ဆိုတာကို ကိုယ်တိုင်
သဘောပေါက်ပြီး ကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်နဲ့ ဆုံးဖြတ်ခံယူတာဟာ အသင့်
တော်ဆုံး အမှန်ကန်ဆုံး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်”
“ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်နဲ့ စာရေးဆရာတွေရဲ့ အဋ္ဌကထာ၊
ဋီကာ စတာတွေကို အတူတူချည်းပဲ ထင်ပြီးပြောနေကြရင်တော့
ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ အလွန်မှားပါလိမ့်မယ်။ ပိဋကတ်တော်ကို
စေ့စေ့စပ်စပ်သေသေချာချာ မလေ့လာခဲ့ဘူးဆိုတာ ပြရာ
ရောက်ပါလိမ့်မယ်။ ဦးသာဒင်တို့ အင်မတန်အထင်ကြီးတဲ့
အနောက်တိုင်းက ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် ပညာရှင်တွေထဲက
ဗုဒ္ဓဘာသာပိဋကတ်တော်တွေကို စေ့စေ့စပ်စပ်ကြီး လေ့လာမိတဲ့
ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ ဘယ်ဟာဗုဒ္ဓဘုရားဟောအစစ်၊ ဘယ်ဟာက
ဗုဒ္ဓဘာသာသို့ ကူးပြောင်းခဲ့ကြတာတွေ အများကြီးရှိပါတယ် ”
“ဘယ်ဘုရား၊ ဘယ်ဣ ဒ္ဓိပါဒ်ရှင်ကမျှ ကယ်တင်လိမ့်မည်ဟု
မျှော်လင့်တောင့်တနေတဲ့ ဘာသာမျိုးလည်း မဟုတ်ပါဘူး။
ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီး ကိုယ့်ဒုက္ခအသီးသီးမှ ချုပ်ငြိမ်းအောင်
ကိုယ့်ဟာကိုယ် အားထုတ်သွားရတဲ့ လုပ်ငန်းသာလျှင်
ဗုဒ္ဓဘာသာ ဗုဒ္ဓဝါဒမှာရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ
ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ အားထားမှုမျိုး မရှိပါဘူး။ ဓမ္မသက်သက်သာ ရှိပါတယ်။
ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု သင်္ခါရတို့ရဲ့ ကုန်ရာငြိမ်းရာ အသင်္ခတသည်သာ
“ဂေါတမဘုရားရှင်ဖြစ်မည့် သိဒ္ဓတ္ထမင်းသားဟာ မဟာသက္ကရာဇ်(၆၈)ခု
ကဆုန်လပြည့် သောကြာနေ့မှာ ဖွားမြင်တော်မူတယ် (ဘယ်ဘုရင်၊
ဘယ်မိဖုရားက ဘယ်နေရာမှာဖွားမြင်ခဲ့ပြီး၊ ဘယ်နေရာမှာ ဘုရား
ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ အထင်အရှားရှိတယ်) ... .... ယေရှုခရစ်ဟာ ဘယ်နေ့
ဘယ်ရက် ဘယ်လ ဘယ်အချိန် ဘယ်သက္ကရာဇ်မှာ မွေးတယ်ဆိုတဲ့
ရက်ချုပ်ကို မှန်ကန်အောင် အတိအကျပြောနိုင်မယ်ဆိုရင် ဦးပဉ္ဖင်း
ဟောဒီသင်္ကန်းကို ဒီနေရာတွင်ပဲ တစ်ခါတည်း ချွတ်ပုံချခဲ့ပြီး အပြီးတိုင်
----- ကျောင်းဆောင်အပေါ်ထပ်သို့ တက်မိသောအခါ လက်ရှိ
နတ်မှီတောရ၏ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် ရှင်ဆန္ဒာဓိကကို
ဖူးတွေ့ရသည်။ ရှင်ဆန္ဒာဓိကမှာ ဆရာတော်ရှင်ဥက္ကဋ္ဌနှင့်
ဆယ်နှစ်ခန့် အနီးကပ်နေခဲ့ရဖူးသော တပည့်ရင်းလည်း ဖြစ်သည်။
ဆရာတော် ရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဘာသာပြန်ဆိုခဲ့သော ရာဟုလာ
သံကိစ္စည်း၏ “အဘိဓမ္မာ့ အဘိဓမ္မာ”စာအုပ်ကို တည်းဖြတ်
စုစည်းနေဆဲကာလမို့ အရှင်ဆန္ဒာဓိကအနီးတွင် ဟိန္ဒူ ကျမ်း
စာအုပ်များ၊ အဘိဓာန်များ၊ စွယ်စုံကျမ်းများ၊ အဘိဓမ္မာစာအုပ်
များနှင့် ရှုပ်ပွနေတော့သည်။ ရှင်ဥက္ကဋ္ဌဖတ်ခဲ့သော စာအုပ်
အထူကြီးများကို ဆရာတော်က ထုတ်ပြသဖြင့် မြင်ဖူးအောင်
ကြည့်ရသေးသည်။ စားပွဲအောက်ဆီမှ ဟိန္ဒူဘာသာဖြင့်
ရေးထားသော ရာမာယနဝတ္ထုစာအုပ်ကြီးနှင့် ယုဒသန်
ပြုစုခဲ့သော မြန်မာအင်္ဂလိပ် အဘိဓာန်စာအုပ်တို့ကို စိတ်ဝင်စား
နေမိသည်။ မသိသေးသည်များကို မေးမြန်းနေရာမှ မေးခွန်း
များ ထူပြောလာသောအခါ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်က
အေးအေးနေလိုကြောင်းလည်း ရယ်မော၍ ပြောသေးသည်။
----- ဆွမ်းဘုန်းပေးချိန်တန်သဖြင့် ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်
နှင့် စကားစဖြတ်ကာ ဆရာတော်ရှင်ဥက္ကဋ္ဌ သီတင်းသုံး
ခဲ့သော အခန်းငယ်လေးဆီသို့သွားရန် ကျောင်းပေါ်မှ
ဆင်းခဲ့သည်။ ကျောင်းဝင်းမြေကို ပြန်အနင်းတွင် ဖိနပ်ကို
ချမစီးမိဘဲ လက်က ယောင်၍ ကိုင်ထားမိသည်။ အနီးရှိ
ကိုရင်လေးတစ်ပါးက ဖိနပ်စီးဖို့ ပြောရာမှ နတ်မှီတောရ၏
လွတ်လပ်ခွင့်ကို သတိရတော့သည်။ အစွဲမပြုတ်နိုင်သဖြင့်
လက်ထဲတွင် ဖိနပ်တစ်ရံနှင့် မလွတ်မလပ် ဖြစ်ရသည်။
အစွဲပြုတ် တဲကုပ်ရွှေနန်းတော် မဟုတ်ပါလား။
----- ဆရာတော်ရှင်ဥက္ကဋ္ဌ သီတင်းသုံးခဲ့သော အခန်းကလေး
ကို ပြတိုက်သဖွယ် ပြင်ဆင်ထားသည်။ ပြတိုက်ထဲသို့ ရောက်
နေသောဆရာတော်၏ဘဝကို တွေးမိသဖြင့် ဝမ်းနည်းရသည်။
သို့သော် ဆရာတော်လျှောက်ခဲ့သောလမ်းကို ပြတိုက်ကလေး
က အပြည့်အဝနီးပါး ပြစွမ်းနိုင်ပေသည်။ အခန်းအဝင်ဝတွင်
ဆရာတော်၏ နေ့စဉ်ဘဝ လုပ်ငန်းဆောင်တာတို့ကို စာရင်း
နံနက် ၆ နာရီ ဆန်ပြုတ်ဘုန်းပေး။
နံနက် ၆နာရီမှ ၈နာရီထိ စာကြည့်။
၈နာရီမှ ၉နာရီထိ ဧည့်သည်များနှင့် တွေ့ဆုံ။
၉နာရီမှ ၁၀း၃၀နာရီအထိ စဉ်းစားနေ။
၁၀း၃၀ နာရီ ရေချိုး။
ဆွမ်းစားပြီးချိန်မှ ၁း၃၀နာရီခန့်အထိ ကျိန်းစက်နားနေ။
၁နာရီခွဲခန့်မှ ညနေ ၄နာရီအထိ စာရေး စာကြည့်။
၄နာရီမှ ၅နာရီခန့်အထိ လမ်းလျှောက်။
၅နာရီမှ ၇နာရီခန့်အထိ ကျောင်းတွင်း ရဟန်းများနှင့် အထွေထွေဆွေးနွေး။
၇နာရီမှ ၉နာရီထိ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှ ရေဒီယိုသတင်းများ နားထောင်။
အခန်းထဲသို့ဝင်လျှင်ဝင်ချင်း ဆရာတော်ကျိန်းစက်ခဲ့ရာ ကုတင်
လေးကို တွေ့ရသည်။ ခြုံစောင်၊ ခေါင်းအုံး၊ သင်္ကန်း တစ်ထည်
ခေါက်လျက်သားနှင့် တောင်ဝှေးတစ်ချောင်းကို တင်ထားသည်။
ကုတင်ခြေရင်းတွင် ဆရာတော် အသုံးပြုခဲ့သော လက်နှိပ်စက်
အိုလေး တစ်လုံး ရှိသည်။
----- အခန်းပတ်လည်နံရံများပေါ်တွင် မှတ်တမ်းဝင်ဓာတ်ပုံများ
ချိတ်ဆွဲပြသထားသည်။ မှန်ဗီရိုလေးထဲတွင် ဆရာတော်၏
လက်ရေးစာမူကလေးများလည်း ရှိသည်။ ပေထုပ်အချို့
ကိုလည်း တွေ့ရသည်။ အခန်းက အနည်းငယ်မှောင်နေသဖြင့်
ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ မလွယ်ကူပေ။ အခန်းထဲမှပြန်အထွက် အခန်း
ကျယ်ကြီးထဲတွင် စာအုပ်ဗီရိုကြီးများကို တွေ့ရပြန်သည်။
ဆရာတော်ရေးသားစီရင်ခဲ့သော စာအုပ်များကို ဗီရိုအလတ်
တစ်လုံးဖြင့် သပ်သပ်စီထည့်ထားသည်။ ဗီရိုအထက်က နံရံတွင်
ဗီယက်နမ်သမ္မတဟိုချီမင်းနှင့် ဆရာတော်ရှင်ဥက္ကဋ္ဌတို့ စကား
လက်ဆုံကျနေဟန် ပန်းချီကားကို တွေ့ရသည်။
----- ပန်းချီကား၏ အောက်နားဆီတွင် ဘုရားဟော ကေသမုတ္တိ
သုတ်တော်လာ ကာလာမရွာသားတို့အား ပေးခဲ့သော အမှန်တရား
ရှာနည်း နိဿရည်းကို ပါဠိ၊ အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာ ဘာသာသုံးမျိုးဖြင့်
“အို ... ကာလာမမင်းတို့ ...
အခြင်းအရာကို ကြံစည်သောအားဖြင့် လည်းကောင်း
ဟုတ်ပြီ မှန်ပြီဟု မယူကုန်လင့်ဦး”
----- ကာလာမသုတ်တော်သည် ဆရာတော်ရှင်ဥက္ကဋ္ဌကိုယ်တိုင်
စွဲစွဲမြဲမြဲ ဆုပ်ကိုင်ခဲ့သော ဘုရားဟော ဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာတရား
တော်များကို ချဉ်းကပ်ရာတွင် ဆရာတော်ရှင်ဥက္ကဋ္ဌသည် ကာလာမ
သုတ်၏ ဟောချက်အတိုင်းပင် လိုက်နာခဲ့သည်ချည်း ဖြစ်၏။
ဆရာတော်ရှင်ဥက္ကဋ္ဌသည် ဗုဒ္ဓဝါဒ ဗုဒ္ဓလမ်းစဉ် အစစ်အမှန်ကို
လိုက်ရင်းကပင် အိန္ဒိယပြည်သို့ ရောက်သောအခါ ဟိန္ဒူဗြဟ္မဏဝါဒ
ကြီးများနှင့် တိုးတိုက်ခဲ့မိလေသည်။ ထိုစဉ်အခါကလည်း ကာလာမ
ရွာသားတို့အား ဗုဒ္ဓပေးခဲ့သော စစ်တမ်းထုတ်နည်းဖြင့် မြန်မာပြည်
----- လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၂၅၀၀ကျော်က ကာလာမပုဏ္ဏားတို့ကို
အကြောင်းပြု၍ ဗုဒ္ဓကိုယ်တော်တိုင် ဟောကြားခဲ့သောတရားတော်
ကို ဆရာတော်ရှင်ဥက္ကဋ္ဌက သင့်လျှော်အောင် မြန်မာပြန်၍
ဗုဒ္ဓစာချွန်တော်ဟု အမည်ပေးကာ ထုတ်ဝေခဲ့ဖူးပါသည်။
သူပြောလူပြော တစ်ဆင့်စကားကို ကြားကာမတ္တနှင့် မှန်လှပြီ၊
အသင်တို့၏ အမိအဖ၊ ဆရာသမား၊ သက်ကြီးဝါရင့်များက
ပြောကြားခဲ့တဲ့ စကားဖြစ်လို့ မုချဧကန် တကယ်မှန်ရမည်ဟု
မမှတ်ယူကြကုန်ရာ။ သင်တို့၏ ရှေးစာအုပ်ကြီးတွေ၊ ပေထုပ်ကြီး
တွေ၊ ပုရပိုက်ကြီးတွေထဲမှာ ပါရှိတယ်ဆိုရုံမျှနှင့် မှန်လှပြီဟု
အသင်တို့၏ ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ရာ ဘုရားရဟန္တာတို့၏ မုက္ခ
ပါဌ်အစစ်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုကာမတ္တဖြင့် မချွတ်ဧကန် မှန်လှပြီဟု
သက်ကြီးစကား သက်ငယ်ကြားဟူသော ပရိဘာသာအရ အစဉ်
အလာကို ရိုသေသမှု ဤတစ်ခုတည်းဖြင့် မည်သည့်အရာကိုမျှ
မှန်လှပြီဟု တထစ်ချ မမှတ်ကြကုန်ရာ။
အချုပ်အားဖြင့် ဆိုရသော် အားလုံးသော အရာများကို အသင်တို့
၏ ဝိဘဇ္ဇ (ဝါ) ဝေဘန်ဥာဏ်ဟူသော ချိန်ခွင်စက်၌ တင်စက်၍
ဝိစာရဏ (ဝါ) နှိုင်းယှဉ်ဆင်ခြင်မှု မှတ်ကျောက်၌ တိုက်၍
ဘုရားရဟန္တာနှင့် လူသာမန်၊ အဘိဓမ္မာဆရာနှင့် လူအ၊
ဘုရားတကာနှင့် လူယုတ်မာ၊ ဓနရှင်နှင့် ကျောမွဲ၊ လယ်ထဲကလူ
နှင့် နန်းတော်ပေါ်ကလူ ဟူ၍ ခွဲခြားပြီး မျက်နှာလိုက်မနေပါနှင့်။
အပြင်းအထန် ဝေဘန်ကြကုန်လော့။ ဆွေးနွေး၍ စစ်ဆေးကြ
ကုန်လော့။ ဝိဘဇ္ဇနှင့် ဝိစာရဏမှ ကင်းလျှင် အမှန်နားသို့
----- ဆရာတော်ရှင်ဥက္ကဋ္ဌ၏ ဗုဒ္ဓသာသနာ ၂၅၀၀ပြည့်မှတ်တိုင်
ကို ကျောင်းဝင်းထဲတွင် စိုက်ထူထားပါသည်။ စေတီပုံစံမဟုတ်
သည်က ထူးခြားချက်ဖြစ်သည်။ ကျောင်းဝင်းထဲတွင်လည်း
ဘာစေတီမှ မရှိပါ။ ထုထည်ကြီးမားလှသော သာသနာ၂၅၀၀ပြည့်
ကျောက်တိုင်ကြီးသာ ရှိလေသည်။ ၂၄ရက် - မေ - ၁၉၅၆ ခုနှစ်
တွင် ဆရာတော်ကိုယ်တိုင် ကြီးမှူး၍ တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်
သည်။ မျက်နှာစာလေးခု ရှိသည်။ အရပ်မျက်နှာတစ်ခုစီတွင် ဗုဒ္ဓ
သြဝါဒ၊ ဗုဒ္ဓလမ်းစဉ်၊ ဗုဒ္ဓအခြေခံသဘောတရား၊ ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာ
စသဖြင့် ဆောင်ပုဒ်ကလေးများကို ရေးထွင်းထားလေသည်။
ကိုယ့်ရုပ် ကိုယ်ပြောင်း ကိုယ်ကောင်းအောင်ကြံ
ကိုယ့်အစာ ကိုယ်စား - ကိုယ်မှားလျှင်ခံ
ကိုယ့်လှေ ကိုယ်ထိုး - ပဂိုးနှင့် ပဂံ
ကိုယ့်ဇိမ်တွေ့၊ ကိုယ်မွေ့ ကိုယ်ပင်စံ။
နီဝရဏ - ငါးဝပယ်ခြိုင်
စား- သောံ - ရှူ - ထုပ် - သိမ်းချုပ် - ခါထိုင်
ဈာန် - မဂ်ငြမ်း၊ တက်လှမ်းနိဗ္ဗာန်တိုင်။
အရှိ - အဖြစ် - အရိပ် - အထင်
အရှိ - တရား ထင်လျားသိမြင်
အဖြစ် - အရိပ် ခဲကြိတ်ပြုပြင်
အထင် - ပစ်၊ အနှစ်နိဗ္ဗာန်ဝင်။
သူ့ဟာ - သူထား - အလကားဟာတွေ
စ - သ - ဃ - ဇ - က နှင့် ဆုံချေ
ကောင်း - ဆိုး ခွဲ, ပေါ်မျဲ ဝိညာဏေ။
----- ရှစ်လုံးဘွဲ့ကဗျာအမျိုးအစားများ ဖြစ်သည်ကို တွေ့ရသည်။
သီ သံ သ သံ လေးတန်ကို မသိ၍ အနီးရှိ နယ်ခံ ဦးလေးကြီး
တစ်ယောက်ကို မေးသောအခါ ပိုင်နိုင်စွာ အဖြေမပေးနိုင်၍
မသိခဲ့ရပေ။ စ သ ဃ ဇ က ကိုလည်း ဆက်၍ မမေးဖြစ်တော့။
----- ပေလေးပင် ရှင်လေးပါး အထိမ်းအမှတ် ကျောက်စာတိုင်
ကိုလည်း ကျောင်းဝင်းထဲမှာပင် တွေ့ရသည်။ လေးမြှောင့်တိုင်ကြီး
ဖြစ်၏။ ရှင်လေးပါး၏ မွေးသက္ကရာဇ်နှင့် ပျံလွန်သက္ကရာဇ်များကို
ရေးထွင်းထားသဖြင့် ကူးယူခဲ့၏။ မြန်မာသက္ကရာဇ်များ ဖြစ်ပါသည်။
ပျံလွန် - ၈၈၂
(၈၁၅ - ၉၁၂)
(၈၁၅ - ၈၅၅)
(၈၁၅ - ၈၆၈)
----- ကျောင်းဝင်းထဲတွင် နေရာစုံရောက်ခဲ့၍ ပြန်ဖို့ စိတ်ကူး
ရသောအခါ မွန်းတည့်လေပြီ။ နတ်မှီတောရမှ ပြန်ထွက်ခဲ့၍
ဆရာတော်၏ ဇာတိဖြစ်သော အိမ်ခြေနှစ်ဆယ်ခန့်ရှိ ဆီမီးထွန်း
ရွာကလေးသို့ သွားဖို့ စဉ်းစားမိသည်။ သို့သော် မြို့နှင့်ဝေးသည်
ထင်၍ မသွားဖြစ်ခဲ့။ ဆရာတော်ကို ၁၉-၉-၁၈၉၇ (မြန်မာသက္ကရာဇ်
၁၂၅၉ခုနှစ်၊ တော်သလင်းလဆုတ် ၉- ရက်) တွင် တောင်တွင်း
ကြီးမြို့အရှေ့မြောက်ဘက်ရှိ ဆီမီးထွန်းရွာ၌ ဖခင်မွန်းရွှေထပ်၊
မိခင်ဒေါ်လှဝါတို့မှ ဖွားမြင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ မြို့ထဲသို့
ပြန်ဝင်ကာ ဆရာတော်တည်ထောင်ခဲ့သော ဥက္ကဋ္ဌ ဗုဒ္ဓမစ်ရှင်
ကျောင်းရှေ့က ဖြတ်၍ ပြန်ခဲ့သည်။
----- အိုဘီအမ်(O.B.M)ဗုဒ္ဓသာသနာပြုကျောင်းကို ၁၉၃၂
ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုစဉ်က တို့ဗမာတွေ
“သခင်”ဟု ကြွေးကျော်ခါစ အချိန်ဖြစ်သည်။ ရှင်ဥက္ကဋ္ဌသည်
ထိုကျောင်း၏ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးအဖြစ် ထင်ထင်ရှားရှား
အမည်ခံ၍ အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ အမျိုးသားကျောင်းဆိုကာမျှနှင့်
သူပုန်ကျောင်းဟု အင်္ဂလိပ်အစိုးရက မျက်မုန်းကျိုးနေခိုက်
ကာလဝယ် ကျောင်းအုပ်ဖြစ်သူမှာ သူပုန်ခေါင်းဆောင်ကြီး
သဖွယ် ရှိခဲ့ပေမည်။ အင်္ဂလိပ်စာကို ထွန်တုံးပေါ်ရောက်စေရမည်
ဟု ကြွေးကျော်၍ ခေတ်အသိ၊ ခေတ်ပညာ၊ အမျိုးသားရေး
စိတ်ဓာတ်တို့ကို သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ ကျောင်း၏ ဆောင်ပုဒ်မှာ
“ဆင်းရဲသားကို အလုပ်အကျွေးပြုခြင်းသည် ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ကို
အလုပ်အကျွေးပြုခြင်းပင် မည်၏”ဟူသော ဗုဒ္ဓ၏တရားတော်
ဖြစ်သည်။ အိုဘီအမ် အမျိုးသားကျောင်းသည် တောင်တွင်းကြီး
မြို့နယ် တို့ဗမာအစည်းအရုံး ဌာနချုပ်လည်း ဖြစ်ခဲ့ဖူးသည်။
အင်္ဂလိပ်များ၊ ဂျပန်များကို တော်လှန်သည့် စခန်းတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ရုံ
မျှမက ပြည်သူ့ရဲဘော်၊ ဆိုရှယ်လစ်၊ ကွန်မြူနစ် အမျိုးသားရေး
လှုပ်ရှားမှုမှန်သမျှတို့နှင့် ဆက်စပ်ပတ်သက်နေခဲ့သော ကျောင်း
တစ်ခု ဖြစ်လေသည်။ ဆရာသိန်းဖေမြင့်ပင် ထိုကျောင်းတွင်
ဆရာအဖြစ်ဝင်လုပ်ခဲ့သေးသည်ဟု ဖတ်ဖူးပါသည်။ ယခုအခါ
ထိုကျောင်းမှ ထွက်သော ကျောင်းသားကြီးများ အချို့ သက်ရှိ
ထင်ရှားဖြင့် နိုင်ငံအရပ်ရပ်တွင် ရှိနေကြမည်လားဟု တွေးမိပါသည်။
----- နတ်မှီတောရကိုလည်း ရောက်၍ ပြန်ခဲ့ပြီ။ အမျိုးသားကျောင်း
ကိုလည်း မြင်ခဲ့ရပြီ။ ဆရာတော်ရှင်ဥက္ကဋ္ဌ၏ ခြေရာထင်သောမြေမှ
ပြန်ခါနီးတွင် ဆရာပါရဂူ၏ ဝါကျအချို့ကို ရုတ်တရက် သတိရ
လိုက်မိသည်။ ၁၃၂၈ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့ ဆရာတော်
သက်တော် ၇၀၊ ဝါတော် ၅၀ပြည့် အခမ်းအနားတွင် ဖတ်ကြား
သော ဆရာပါရဂူ၏ စာတမ်းထဲမှ ဖြစ်ပါသည်။
၂၄ - ဇူလိုင် - ၂၀၁၁။
(မှတ်ချက်။ ။ Noel Prime ၏ facebook စာမျက်နှာမှ
Posted by ကိုအောင် at 02:40
31 July 2011 at 08:41
ဒါကိုဖတ်လိုက်ရတော့ ဖတ်ဘူးထားတာလေးတွေနဲ့အတူ ဆရာတော်အကြောင်းပိုသိသွားရတယ်၊
ဆရာပါရဂူ ရေးတာက ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကို အဟောင်းသမားလို့ စွပ်စွဲသလို ဖြစ်နေတယ်။ မြတ်စွာဘုရား ရှာတွေ့ခဲ့တဲ့ အမှန်တရားတွေက အနန္တစကြဝဠာရဲ့ ခြွင်းချက်မဲ့ အမှန်တရားတွေမို့ အသစ်ဖြစ်အောင်ဆိုပြီး ခုတစ်မျိုးနောက် တစ်မျိုး ပြောင်းလို့မှ မရတာ။ အဟောင်းဖြစ်တိုင်းသာ ပြောင်းကြေးဆို ''ကမ္ဘာကြီး လုံးတယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆက နှစ်ကြာတော့ အဟောင်းဖြစ်သွားပြီ။ အသစ်ဖြစ်အောင် ကမ္ဘာကြီး ပြားတယ်လို့ ပြောင်းပြောကြစို့''ဆိုရင် သိပ္ပံပညာရှင်တွေက ရူးနေလား ပြန်မေးမှာပေါ့။
သူတို့ကိုးကွယ်တဲ့ ကွန်မြူနစ်ဝါဒဆိုတာလဲ နှစ် ၇၀ ကျော်လို့ အဟောင်းဖြစ်သွားပြီ၊ သုံးစားမရတော့ဘူး၊ မြောင်းထဲပို့ကြစို့ဆိုပြီး ပို့လိုက်ပါလား။
ကျွန်တော် ဆရာကြီးကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေး လေးစားခင်မင်ပေမယ့် စာပေနှံ့စပ်တာ အားကျပေမယ့် ဘာသာရေး လက်တွေ့ ကျင့်ကြံအားထုတ်မှုမှာတော့ ဆရာကြီး အားနည်းတယ်လို့ လေးစားစွာ ပြောချင်တယ်ဗျာ။ ရှင်ဥက္ကဌက လူသေရင် လူပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီး ဘုရားမဟောခဲ့တဲ့ သူ့စိတ်ကူးယဉ်လုပ်ဇာတ်တွေကို ဘုရားဟောပါဆိုပြီး လိမ်လို့ ဘုရားသားတော်စစ် သံဃာတွေနဲ့ ပြဿနာဖြစ်ရတာပါ။
လူသေရင် လူပဲဖြစ်တယ်ဆိုရင် ငရဲဆိုတာမရှိ၊ ပြိတ္တာအသူရကာယ်ဆိုတာမရှိ၊ လူသေရင် တိရစ္ဆာန်လဲ မဖြစ်နိုင်။ လူသေ လူပဲဖြစ်တယ်။ ဘာမှမပူနဲ့ဆိုတော့ ဒါနသီလ ဘာမှ မလုပ်ချင်တဲ့လူတွေနဲ့ အကိုက်ပေါ့။ ကြိုက်သလိုသာနေ၊ သေရင် လူပဲပြန်ဖြစ်မှာ စိတ်ချဆိုတော့။
ရှင်ဥက္ကဌတောင် လူပြန်ဖြစ်မယ်လို့ ကျွန်တော်မထင်ဘူး။ ဘုရားရှင်ကို ဒီလောက် ကျေးဇူးမဲ့တဲ့လူ ငရဲသွားမယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်တယ်။ ငရဲက လွတ်ရင်တော့ ပြိတ္တာ၊ အသူရကာယ်နဲ့ တိရစ္ဆာန်ဘုံ တစ်ဘုံဘုံမှာ ရှိကောင်းပါရဲ့။
ဖတ်လို့အင်မတန် ကောင်းပါတယ်ဗျာ..။
ဒါနဲ့ကျွန်တော်မသေချာတာလေး တစ်ခု
မေးကြည့် ချင်လို့ ပါ။ အဲ့ ဒီ ရှင်ဥက္ကဌဆရာတော်
က ကျွန်တော်တို့ မမှီလိုက်တဲ့ဟို .. လူသေ
လူဖြစ်ဝါဒ ကို ဟောကြားခဲ့ တဲ့ ဆရာတော်လား
31 July 2011 at 13:45
m t n said...
kyaw swar are you ma sa la or army man? do u know exactly lu thay lu phyet? u don't know exactly,u don't say about sayadaw.i thint u must go to ngaye.
kyaw swar r u ma sa la or army man? do u know exactly lu thay lu phyet va da? u don't know exactly ,u don't say about sayadaw. u must go to ngaye.
31 July 2011 at 17:13
ကွန်မန့်ရေးတဲ့ ကျော်စွာ ဆိုသူရဲ့ ရေးသားတွေးခေါ်ချက်ကို ထောက်ခံပါတယ်။
အောက်က အင်္ဂလိပ်လို ကွန်မန့်ရေးပြီး ကျော်စွာကို ကန့်ကွက်သူတွေဟာ လူသေလူဖြစ် ရှင်ဥက္ကဌ ကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ တနည်းနည်း ကိုးကွယ်နေတဲ့ အဂတိတပါးပါး လိုက်စားနေသူတွေလို့ သတ်မှတ်ချင်ပါတယ်။ခင်ဗျားတို့ဆရာတော်ကို မဆလခေတ်မှာ အဓမ္မ၀ါဒီလို့ သံဃာ့နာယကက ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာရယ်-ဆရာပါရဂူဟာ ရှုင်ဥက္ကဌရဲ့တပည့်၇ဟန်းတပါးဖြစ်ခဲ့ပြီး လူထွက်ခဲ့တာရယ်ကြောင့် ခင်ဗျားတို့က ရှင်ဥက္ကဌနဲ့အပေါင်းအပါတွေကို အဓမ္မ၀ါဒီလို့ ပြောတဲ့သူတိုင်းကို မဆလလား -အာမီကလားလို့ မျက်လုံးမှိတ် စွတ်ရမ်းချင်ကြတာကိုး။ဘာသာရေးကိစ္စအငြင်းပွားရင် ပုဂ္ဂိုလ်ထက် တရားဓမ္မကို ဦးစားပေးပြောဆိုဆုံးဖြတ်ရတာကို သဘောပေါက်ကြပါ။ကျနော် မဆလမဟုတ်-အာမီ မဟုတ်-မဟုတ်မမှန်တာကို တော်လှန်နေသူတယောက်သာ။
31 July 2011 at 23:32
လူသေလူဖြစ်ကို လက်ခံထားတဲ့ ဆရာတော်ကို အမွှန်းတင်ပြီး စာဖွဲ့နေတာလား။
မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောကြားထားတဲ့ တရားတော်တွေက နှစ်ဘယ်လောက်ကြာကြာ ပြောင်းလဲစရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး။
အခုလက်မခံလည်း နောင်လက်ခံလိမ့်မယ်လို့ စိတ်ကူးယဉ်တာတော့ လွန်လွန်းနေပြီ။
1 August 2011 at 03:34
ကျတော် ခုဖတ်တဲ့ စာအုပ်ထဲမှာ ဒီဆရာတော်ရဲ့အကြောင်း ထောက်ပြထားတာတွေ ဖတ်နေတုံးရှိသေးတယ်။
ဖေဖေကတော့ပြောတယ် ကျောက်ကွင်းအရေးတော်ပုံတုံးက ဟုတ်သလောက် ဘယ်လိုဖြစ်သွားတာလဲ မသိဘူး လို့ ပြောခဲ့ဘူးသေးတယ်။
ထက်စု ရေ ...
ဒါ facebook ပေါ်က ဆောင်းပါးပါ၊ ကျနော့် ဆောင်းပါ မဟုတ်ပါဘူး၊ စာကို သေသေချာချာ ဖတ်ပါ ...
1 August 2011 at 10:20
ကိုယ့်ဆောင်းပါး ဟုတ်ဟုတ် မဟုတ်ဟုတ် ကိုယ်တိုင်သဘောတူ ထောက်ခံလို့ပေါ့။
ကိုယ်တိုင်၊စိတ်တူ၊ချီးမွှမ်း၊ထောက်ခံ အားလုံးက သဘောအတူတူပဲ။ အပြစ်လည်း အတူတူပဲ။
ကျွန်တော် ကြည်ညိုလေးစားရတဲ့ ဆရာတော် သျှင်ဥက္ကဌ ရဲ့ ရုပ်ပုံတော်ကိုဖူးတွေ့ ခွင့်ရလို့ကျေးဇူးပါ အစ်ကိုအောင်
ဆရာတော်ကြီးရဲ့ ကျယ်ပြန့် နက်ရှိုင်းတဲ့ ဓမ္မအမြင်တွေ ကို အရမ်းနှစ်ချိုက်တဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ
ဆရာတော့် ပုံတော်တွေ save လုပ်ယူသွားပါတယ်
1 August 2011 at 11:48
ဒီ post အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုအောင် ရေ
ကိုယ်နဲ့ အမြင် မတူတာနဲ့ မှားတယ်လို့ သတ်မှတ်နေတဲ့ အစွန်းရောက် ဝါဒီတွေ အတွက်တော့ ဝမ်းနည်းပါတယ်
အခု ဒေါသတကြီး အော်နေတဲ့ လူတွေထဲမှာ သျှင်ဥက္ကဌ ရဲ့ စာအုပ်တွေ သေချာ လေ့လာဖူးတဲ့ လူမပါဘူး ထင်ပါတယ်
စာအုပ်ခေါင်းစဉ် ကြားပီး ရမ်းသန်း အော်နေကြတဲ့လူ ပိုများသလား လို့ ... မှားသွားရင်တော့ တောင်းပန်ပါတယ်
ကိုယ်နဲ့အမြင်မတူရင် ဘာလို့အမြင်မတူလဲ ဆိုတာကို မလေ့လာနိုင်ကြဘူးလာဗျာ
ဒီလို ဘာသာရေး နဲ့ ပတ်သက်ရင် အမြင်မတူတာနဲ့ ငါသိတာအမှန် ကျန်တာအမှား
ကိုယ်နဲ့မတူ ကိုယ့်ရန်သူ လို့ ရဲရဲရင့်ရင့် အော်နိုင်မှ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ပီသမယ် ဆိုရင်တော့
ကျွန်တော် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မပီသ သေးကြောင်းပါ ခင်ဗျား
1 August 2011 at 22:46
ဖတ်မှတ်သွားပါတယ်ရှင်။ ပေလေးပင် ၊ ရှင်လေးပါး ထဲက တစ်ပါးအကြောင်းလေး အနည်းငယ် တင်ပြပေးလို့ ကျေးဇူးပါရှင်။
2 August 2011 at 02:29
ဗဟုသုတ အနေနဲ့ ဖတ်ခွင့်ရတဲ့ အတွက်ကျေးဇူးပါ
2 August 2011 at 06:40
ကျွန်တော်ကတော့ ရှင်ဥက္ထရဲ့ စာအုပ်တွေအတော်များ
တယ်.ဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်ဟောကြားခဲ့ တဲ့ ကာလာမသုတ်
2 August 2011 at 18:28
3 August 2011 at 01:09
တောင်တွင်းကြီးဖက်မှာ ပညာတတ် ပုဂ္ဂိုလ်တွေ အများကြီးပေါ်ထွန်းခဲ့တယ်နော်။
အန်တီ့အမျိုးသားက တောင်တွင်းကြီးဖက်ကဆိုတော့ မကြာခနရောက်ဘူးတယ်။
ကာလာမသုတ် အတိုင်း ဦးနှောက်လေးသုံးပြီး စဉ်းစားကြကုန်လော။ အထူးအားဖြင့် ရှင်သေမင်းအတွက်ပါ။
လွပ်လပ်စွာယုံကြည်ခွင့် ပေါ့ ..
ဆိုတော့ လူသာနှင့် မြေလွာစာအုပ်ကိုဖက်ပြီး
တိုင်ဖန်တီခဲ့ တာပါ.........လေးစာစွာဖြင့် 
3 August 2011 at 15:29
မြတ်စွာဘုရားကလည်း ဖန်ဆင်းတယ်လို့ တလုံးမှ မပြောခဲ့ပါဘူး။ လူသေရင် လူဖြစ်တယ်လို့ လည်း မဟောခဲ့ပါဘူး။ သေချာစွာ သုံးသပ်ပါ။
ကိုအောင် ရေ . . ကွန့်မင့်တွေ နည်းသေးသလိုပဲနော်။ ကိုအောင့် ဘလော့ကို လူသိပ်မသိသေးဘူးထင်တယ်။
မထက်စုနှင်းဆီရေ.. ခင်းဗျားလင့်ပေးထားတဲ့ စာအုပ်က ဘာကြောင့်ရှင်ဥက္ကဌ ပျံလွန်တော်မူပြီးမှ ထွက်ရတာလဲ။(သာမန်လူပြိန်းတယောက်နားမလည်လို့မေးခြင်းဟုမှတ်ယူပါ)
နောက်ပြီး ခင်ဗျားမှန်နေတာ အကုန်လုံးသိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူတယောက်ကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရတိုက်ခိုက်တာ မသင့်တော်ပါဘူး။ ဥပမာ ရှင်သေမင်း ဆိုတာမျိုးပါ။
ကို သျှင်နေမင်း ရဲ့ လွတ်လပ်စွာယုံကြည်ခွင့် ကိုလည်း လေးစားပါတယ်။
ထို့အပြင် လူသားနှင့် မြေလွှာ နှင့် လူသေလူဖြစ် စာအုပ် ebook ရှိမယ်ဆိုရင် share စေလိုပါတယ်။
http://shwemm.blog.com/2009/09/27/%E1%80%95%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%9E%E1%80%94%E1%80%AD%E1%80%9A%E1%80%80%E1%80%B6-%E1%80%A1%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%B3%E1%80%81%E1%80%B6%E1%80%9B%E1%80%90%E1%80%B2%E1%80%B7-%E1%80%9B%E1%80%9F%E1%80%94/ (ရှင်သေမင်းအတွက် အထူးဆောင်းပါး)
4 August 2011 at 04:29
သျှင်နေမင်း ဆိုတဲ့သူ.. လွပ်လပ်စွာယုံကြည်ခွင့် ရှိပါတယ်.. လွပ်လပ်စွာကွဲလွဲခွင့်လည်းရှိတယ်.. မင်းရှင်ဥက္ကဌက လူသေရင် လူပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီး ဘုရားမဟောခဲ့တဲ့ သူ့စိတ်ကူးယဉ်လုပ်ဇာတ်တွေကို ဘုရားဟောပါဆိုပြီး လိမ်တာပါ၊ တစ်ကယ်ဆို ဘုရားဟော ကဒီဝါဒနဲ့ ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး၊ ဘုရားဟောပါလို့ခေါင်းစဉ်တပ်မှ လူတွေရဲ့ ယုံကြည်မှုကို လွယ်လွယ်ရမှာမို့ပါ၊ ဘုရားဝါဒနဲ့ဘာမှ မဆိုင်တဲ့ ယူဆမှုတွေကို ရှင်ဥက္ကဌနဲ့ မင်းတို့တွေက လက်ခံတယ်ဆိုရင် မင်းတို့ကို မင်းတို့ ဗုဒ္ဓ၀ါဒီအဖြစ် စွန့်လွှတ်ပြီး ရှင်ဥက္ကဌ၀ါဒီ (ရှင်ဥက္ကဌဘာသာဝင်)လုပ် ရှင်ဥက္ကဌကို ကိုးကွယ်ပြီး ဗုဒ္ဓနံမည် ဗုဒ္ဓတရားတွေကို မေ့လိုက်ပါ၊ တခြားဘာသာဝင်တွေက ဗုဒ္ဓ၀ါဒ ကို အမြင်မှားကုန်မယ်၊ ငါတို့က ဗုဒ္ဓတရားနဲ့ အဆုံးမ ကို ခံယူတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေမို့လို့ ရှင်ဥက္ကဌကို (ဗုဒ္ဓတရားနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့အယူရှိသူ)ကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အဖြစ်ကို လက်မခံတာပဲ
တိုင်ဖန်တီးခဲ့ တာပါ} မင်းပြောသလိုပါပဲ တို့ဗုဒ္ဓကလည်း ဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒ သမားမဟုတ်ပါဘူး.. ကိုယ်လုပ်မှကိုယ်ရတယ်ဆိုတဲ့ ကံ ကံရဲ့ အကြောင်းတရားနဲ့ အကျိုးတရားကို ယုံကြည်သူ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တွေပါပဲ..
4 August 2011 at 06:43
တောင်တွင်း ကြီး ကတကယ် ကို ပညာရှင်အကျော်အမော် တွေထွက်တာ ဟိုးတုံးကတည်း ကနေအခုထက်ထိပဲ။
ဦးအောင်သင်း လဲ တောင်တွင်း ကြီး ကပဲ။နောက်လဲ ထွက်လာမှာပဲ။ ပေတပင် ရှင် ကိုကြည်ညိုတာ ကြာပီ၊ ကျေးဇူး အရန်းတင်ပါတယ်ဗျာ
လူသေလူဖြစ် ဝိနိစ္ဆယကို မဖတ်ဖူးသေးသူများအတွက်.. ဒေါင်းလုပ်လင့်ပါ..
ဆရာတော်ရေးတဲ့ ( လူသေလူဖြစ် ) က ဘုရားဟော မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတော့ လက်ခံပါတယ် ....ဆရာတော်ရဲ့ မကောင်းကြောင်းတွေကိုပဲရွေးပြီး ပြောမနေပဲနဲ့ဆရာတော်လုပ်ခဲ့ တဲ့ ကောင်းမှုတွေ ကိုလဲပြန်ကြည့် သင့် တယ်လို့ ထင်ပါတယ်..... ဘယ်သူတွေဘာပြောပြော မှားတယ် မှန်တယ်လို့ကျွန်တော် မဝေဖန်လိုပါဘူး ...လွတ်လပ်စွာ ယုံကြည်ခွင့် ဆိုတာ လူတိုင်းမှာရှိပါတယ်...ရှင်ဥက္ကဌ က ပုထုဇဉ် ပါ ....ပုထုဇဉ် ဆိုတာ အတ္တ ရှိပါတယ် အမှားမကင်းပါဘူး.... လေးစားစွာဖြင့် ......
4 August 2011 at 21:00
read kyi kya per
နတ်မှီတောရ ဆရာတော်ကြီးကို ကြည်ညိုပါတယ်၊ ဘာသာရေးဆိုင်ရာတွေကို ရဲရဲရင့်ရင့် တင်ပြခဲ့လို့ လဲ ကျေးဇူးကြီးပါတယ်၊ အခုလို ဓာတ်ပုံတွေ အထောက်အထားတွေနဲ့တွေ့ရလို ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။
24 October 2011 at 10:38
ဆရာတော်ရှိတုန်းကဘာလို.မဖြေရှင်းတာလဲတော့မသိဘူးခင်မျာ အမှန်မှာက အဲဒီလိုဖြေရှင်းသင့်တယ် သူ.မှာဘာအထောက်အထားတွေတွေ.ခဲ့လို.မှန်းမှမသိတာကို ဆရာတော်ဟောခဲ့တာတွေကအမှန်တွေဖြစ်နေခဲ့ရင် အပြစ်ရောက်ပါတယ်
8 December 2011 at 08:16
တကယ်တန်းက ဆရာတော်ရှိစဉ်တုန်းက ရှင်းရမဲ့အရာပါ ဆရာတော်ကဘာအထောက်အထားတွေရှိခဲ့လို.ဟောခဲ့တာမှန်းမှမသိတာကို
အခုပြောနေတဲ့သူတွေကကော ဘယ်လောက်သိလဲမသိဘူးခင်များ သူများမဲတယ်ဆိုလို.လိုက်မဲတာလား ကိုယ်တိုင်သေချာလေ့လာပြီးလို.ပြောကြတာလား ဆရာတော်လေ့လာတာရဲ့ တ၀က်လောက်ကောလေ့လာဖြစ်ရဲ့လားမသိဘူး ဘယ်သူမှန်လားမှားလားတော့မသိပါဘူးနော်
အခုဘလော့ရေးတဲ့လူကိုတော့အားပေးပါတယ် ကျွန်တော်လည်းတောင်တွင်းကြီးသားပါ ဆရာတော်ရေးတဲ့ စာအုပ်လေးတွေရှဲပေးရင်ပိုသဘောကျပါတယ်
8 December 2011 at 08:33
ကျတော် 2006 က ဆရာတော် ရှင်ဥက္ကဌ ရဲ့ ကျောက်ကွင်း အရေးတော်ပုံ ကိုဖတ်ရတယ် ။ နောက်တော့ ကျတော်အဘိဓ္မာ တတ်ရော။ ကျတော် ပြောချင်တာက ဆရာတော်က တော်တော်လေးကို စာပေတွေမှာ နှံ့စပ်တယ် ဆရာတော်နဲ့ ယှဉ်ပြောရဲ့တဲ့လူပာာ မရှိသလောက်ပဲ။ ဆရာတော်ရဲ့ စာအုပ်တွေကိုဖတ်ကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။ ကျတော်ဆိုလိုချင်တာကတော့ ဆရာတော် ပာာ လူသေရင်လူဖြစ်တယ် လို့ တိတိကျကျမပောာခဲ့ပါဘူး။နောက်ကဆရာတွေ ကသာဒီနည်းကို မှားပြီးပြောတယ်လို့ထင်ပါတယ်။
16 September 2012 at 06:59
16 September 2012 at 07:03
16 September 2012 at 07:05
16 September 2012 at 07:10
16 September 2012 at 07:13
16 September 2012 at 07:16
16 September 2012 at 07:19
16 September 2012 at 07:24
ရင်ထဲက ရှစ်ဆယ့်ရှစ် (အပိုင်း ၁+ ၂)
မြန်မာ 0-2 အိုမန် ဘောလုံးပွဲ
The Burma Conspiracy ရုပ်ရှင်ကို အွန်လိုင်းပေါ်တွင်...
အာဇာနည်နေ့တွင် တကိုယ်တော် ဂါရ၀ပြုသူ (မန္တလေးမြို့)
၀မ်းဗိုက်အတွင်းမှ ကျောက်စရစ်ခဲများ အန်ထုတ်ခြင်း (မ...
အမှတ်တရ (အပိုင်း- ၂)
ဒီထက် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဝေဖန်ကြပါ ….
အောင်လား … ကြောင်လား ….
လူပြိန်းဆိုတာ ဗိုလ်ကျရတာကို ကြိုက်တယ်
ဘုရားသခင်ထံမှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ ဖေဖေ